जिल्ला सहकारी संघ बागलुङको साधारणसभा सम्पन्न ! पूँजि निर्माण र परिचालनमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी ! – ebaglung.com
२०७५ पुष १३, शुक्रबार १६:१७	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७५ पुस	१३ । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङको दशौ वार्षिक साधारणसभा शुक्रवार बागलुङ बजारमा सम्पन्न भएको छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै बागलुङ क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद डा.सूर्य पाठकले पूँजि निर्माण र परिचालनमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताए । ग्रामिण क्षेत्रमा पूँजि परिचालन गर्न, गरिवी निवारणका लागि सहयोग गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । उनले सहकारीलाई थप प्रभावकारी बनाउदै उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामबहादुर जिसीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनका लागि निति, विधि, प्रविधिका क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रले समाज रुपान्तरणका गरेका असल कार्यहरुलाई जनमानसमा पु¥याउन सकेमा मात्रै सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि जनताको पूर्ण साथ रहने बताए ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका सञ्चालक चण्डीप्रसाद शर्मा, बागलुङ दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष युक्तप्रसादद कंडेल, सहभागीको तर्फबाट कालिका महिला विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पिंगला जिसी लगायतले सहकारी अभियानमार्फत समाजको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रम संघका अध्यक्ष दिपक गौतमको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष अशोक गोविन्द राजभण्डारीको स्वागत र सचिव तेजेन्द्रबहादुर थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
१३ वर्षिया बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा नेपाली पक्राउ / खुर्कोटका पौडेल काठमाडौमा बेपत्ता !